Inona avy ireo valiny mahazatra amin'ny fitsapana adin-tsaina? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Vokatry ny valin'ny fitsapana ny adin-tsaina isaky ny taona - ahoana no hamahana
Vokatry ny valin'ny fitsapana ny adin-tsaina isaky ny taona - ahoana no hamahana
Inona avy ireo valiny mahazatra amin'ny fitsapana adin-tsaina?
Azo ataovokatranyfitsapanaahitana:ara-dalànamikoriana ny rà mandritra ny fanatanjahan-tena sy fitsaharana.ara-dalànamikoriana ny rà rehefa miala sasatra fa tsy mandritra ny fanatanjahan-tena, mety hanondro lalan-drà voasakana. ambany ny rà mandriaka rehefa manao fanatanjahan-tena sy miala sasatra, manondro ny aretin'ny lalan-dra.
Avy amin'ny Centre Medical Regional Westside aho. Mpitsabo aretim-po aho.
Ary eto tokoa izahay mba haneho anao fitsapana adin-tsaina. Manana an'i Tina, mpilatsaka an-tsitrapo anay izahay, izay nanomboka fitsapana adin-tsaina tokony ho 10 minitra lasa izay. Ary araka ny hitanao eto dia nampifandray ireo tariby izy.
Ireo tariby ireo dia mifandray tsy misy tariby amin'ny solosaintsika; ny solosainantsika raha ny marina dia manao EKG feno. Amin'izao fotoana izao dia manao kapoka 143 isa-minitra. Ary antenainay hahatratra 174 izy ireo.
Ny solo-sainay dia mandrefy ny faritra rehetra ao am-po. Izy ireo amin'ny ankapobeny dia 12. Ary araka ny hitanao dia tsy olana lehibe izany.
Asa tena tsara tokoa no vitany. Raha tsy afaka manao fitsapana adin-tsaina mandroso isika, dia afaka mampiasa fanafody vitsivitsy hanafainganana ny fonao sy handefa sary miaraka amin'ny isotoma atomika manokana. Ny fitsapana ny adin-tsaina dia miseho isaky ny telo minitra.
Ary araka ny hitanao eto dia efa 10 minitra izao no izy. Ary manao asa tsara izy. Manao ahoana ianao ry Tina? - Salama izy, misaotra. - Matetika izahay dia mandre ny tosi-drà isaky ny telo minitra.
Ary amin'ity tranga ity dia 144/80 ny tosidrany farany. Izay indray mandeha ara-dalàna. Araka ny efa nolazaiko teo dia manandrana mahazo kapoka 174 isa-minitra izahay.
Hatreto dia toa normal daholo ny EKG-ny. Azontsika atao koa ny manome salanisa ny kapoka. Ary ity iray ity fony izy dimy minitra sy roapolo segondra, ary eto isika no antonony rehefa miala sasatra izy raha ampitahaina amin'ny EKG ankehitriny.
Mampiasa fitsapana adin-tsaina izahay mba hanombanana ireo olona tsy mahazo aina amin'ny tratra sy EKG dia normal ary afaka manao fanatanjahan-tena. Raha tsy afaka manao fanatanjahan-tena ilay olona dia mila miverina amin'ny fitsaboana isika hanafainganana ny fo. Amin'izany no ahafahantsika maka sary.
Ity no fitsapana adin-tsaina horaisintsika amin'izao fotoana izao, tsy misy karazana tsindrona. Na izany aza, raha mahita fanontaniana momba ity fitsapana adin-tsaina ity isika, amin'ny farany dia ho afaka mampiasa isotota azo tsindrona. Isotope dia toy ny marika nokleary izay azontsika jerena sy sary.
Manao ahoana ianao any? Mieritreritra ve ianao fa afaka manohy - Eny - tena tsara, tena tsara. Ka ny tosidranao izao dia 152/92. Tsara be ny asany.
Izy dia efa manana efa ho 12 minitra ny Bruce Minutes. Ny Bruce Protocol dia fanandramana voamarina izay manomboka ny treadmill ary mitombo isaky ny telo minitra ny hafainganam-pandehan'ny treadmill. Mihazakazaka eo amin'ny dimy mph izy ankehitriny miaraka amin'ny naoty 18.
Ary indray, ity dia fitsapana ho an'ny olona salama ary tena afaka manao fanatanjahan-tena. Izy dia manao asa tsara araka ny hitanao. Ny tanjoko dia ny hiezaka ny hampidina ny tahan'ny hatramin'ny 174 bpm hanaparitahana ny tahanay.
Miofana isan'andro ianao, sa tsy izany? - Ie. - Izany no antony ahafahanao milaza fa tsara ny asany. Ary izany no mpirotsaka an-tsitrapo antsika indray.
Tsy tonga teto izy tamin'ny fanaintainan'ny tratra na zavatra hafa, dia izy. Fa mahita olona marobe aho izay tena tonga mararin'ny tratra ary manao ny asany ary koa ny asa ataony. Indraindray isika dia mandray ity fitsapana ity rehefa misy olona tsy nanao fanatanjahan-tena ary te hanomboka programa fanatanjahan-tena Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala miantso ny biraonay.954-731-1101 Ankehitriny ny fanontaniana azoko matetika dia inona no mitranga rehefa ity fitsapana iray ity lasa tsy ara-dalàna.
Ka ndao hiroso amin'ny karazana fitsapana hafa isika. Indraindray isika dia afaka manao fitsapana adin-tsaina amin'ny isotopotera nokleary, na raha tena voageja ilay tranga, tsy mahita soritr'aretina lehibe ilay olona, ​​afaka miroso amin'ny angiogram isika, izay ataontsika any amin'ny hopitaly koa, any Westside. Saika eo ianao Tina.- Yay.- Manana kapoka 165 isa-minitra ianao, afaka mihazakazaka mandritra ny alina.- Okay.- Tsy sarotra, sa tsy izany? - Tsia. - Nanomboka kely teo aloha ihany koa ity fitsapana ity izahay satria tsy tianay ho lava be ilay lahatsoratra, fa araka ny fahitanareo azy dia fitsapana tsotra fotsiny izany.
Salama tsara izy, tsy misy olana, sa tsy izany? - Tsia. - Hamarininay fa misy ny fividianana mari-pana eto. Raha misy mifoka be dia be, manana mosara miaraka amintsika foana isika hanadiovana.
Eto ianao dia afaka mahita fa efa eo izy amin'ny 14 minitra ary miova. Ary ao anatin'ny segondra vitsy dia 40 segondra eo ho eo izy io, somary lasa somary steeper ary somary haingana kokoa. Ka hiandry 30 segondra hafa indray isika ary raha mahatratra 100 izany dia hajanoko ny fitsapana amin'ny fandehanana eto hahazoana ny fanarenana.
Saika any Tina. Saika eo. Ka tsy mandeha any amin'ny gym angamba ianao anio, sa tsy izany? (mihomehy) Ka, araka ny hitanao, mitondra fiara 20 degre isika izao ary 5,5 kilaometatra isan'ora ny hafainganam-pandehan'izy ireo.
Saika eo izy. Ianao dia eo amin'ny 98 Tina aho izao, 98 isan-jato. Manome antsika pirinty isaky ny telo minitra ny fitaovana, araka ny hitanao eto, ity no fanontana ny EKG farany.
Toa tsara be. Nanantena aho fa ho vonona dieny izao, efa ho eo. Tena sarotra? Miezaha mafy eh? Eo amin'ny 99 isan-jato ianao, heveriko fa hampijanona anao izao. - Okay. - Eny ary, ajanona eto ny fitoeran-kitay.
Ary mandeha milamina ny fitoeran-tongotra hahafahan'izy ireo mamerina ny fitepon'ny fony. Betsaka ny olona no mijanona raha vantany vao atsahako ny fitoeran-tongotra. Ary tsy hevitra tsara izany.
Tianay ny miadana, ka manomboka miadana ny fitepon'ny fo. Mandeha kely kokoa. Raha vantany vao hitako fa milamina izy dia azoko atao ny manakana ny fehikibo.
Ary niaraka tamin'izay dia namarana ny fitsapana ny adin-tsaina izahay. Nahavita asa tsara izy, nampiofana nandritra ny 16 minitra sy 22 segondra izay tsara. Ary tsy nisy fiovana lehibe ny EKG azy, manana tahiry ara-pahasalamana madio izy.
Misaotra Tina. - Misaotra betsaka anao Dr. Cusnir.- Na dia manana fanontaniana aza ianao dia aza misalasala miantso anay amin'ny 954-731-1101.
maratra na vongan-dra
Firy minitra no tsara amin'ny fitsapana adin-tsaina?
Nandritra nyfitsapana, ny marary dia eo amin'ny fitoeran-tongotra na bisikileta mijanona mandra-pahazoany farafaharatsiny 80% amin'ny tahan'ny fo kendrena. Ny tahan'ny fo kendrena dia mety hahatratra haingana kokoa amin'ny olon-dehibe; tanora sy atleta hatramin'ny 20minitrana lava kokoa aza ny fahazoana ny tahan'ny fo kendrena.
Inona ny tahan'ny fitempon'ny fo amin'ny fitsapana adin-tsaina?
nytahan'ny tahan'ny fony kendrenamandritra ny afitsapana adin-tsainamiankina amin'ny taonanao. Ho an'ny olon-dehibe, nyfaratamponymialohafitepon'ny fonydia 220 minus ny taonanao. Ka raha 40 taona ianao diafaratamponymialohafitepon'ny fonydia 220 40 = 180.
Ohatrinona ny salan'isa eo amin'ny fitoeran-tongotra amin'ny fitsapana adin-tsaina?
nyfitsapana adin-tsainamatetika dia maharitra adiny iray, ao anatin'izany ny fanomanana roafotoanaary nyfotoanamila manao ny tena izyfitsapana. Ny tena fampiharanafitsapanamaharitra 15 minitra fotsiny. Handeha an-tongotra matetika ianao amilina fitotoanana manaova bisikileta mijanona.3. 2021.
Inona no dingana manaraka aorian'ny fitsapana adin-tsaina tsy ara-dalàna?
Dingana manaraka: Angiography
rehefanyfitsapana adin-tsainamanondro ny tsy fetezana, ny manam-pahaizana momba ny fo dia mivadika ho manafika kokoa nefa koa mampahalala bebe kokoafitsapana, catheterization fo miaraka amin'ny angiography. Ny fantsona lava manify antsoina hoe catheter dia atsofoka amin'ny lalan-drà mankamin'ny fo.
Fa maninona izy ireo no mamoaka ny tendanao hanao fitsapana adin-tsaina?
Mampitonydiafanafody manampy anao ho tony. Nomena fanafody (fanafody fanatoranana eo an-toerana) ianaomamofona ny tendanao. Izany dia manampy anao hahatsapa ho mahazo aina kokoa mandritra ny fizotrany. Fanatanjahan-tenafitsapana adin-tsainamandrefy ny fombanyfo mifampiraharaha amin'nyadin-tsainany fampihetseham-batana.
Azoko atao ve ny mitondra ny tenako mody aorian'ny fitsapana adin-tsaina?
Mety tsy izanymitondra fiara any an-trano rehefa avy eonyfitsapana. Alohan'ny hahatongavanaofitsapana, mandamina olona haka anaoan-tranoavy eo.
Azonao atao ve ny mandalo fitsapana adin-tsaina ary mbola manana sakanana?
Ny fitsapana adin-tsaina dia afakamamantatra rehefa lalan-draeFA70% na mihoatrafanivanana. Ity tery mafy ity no mahatonga ny fanaintainan'ny tratra mafy antsoina hoe angina. Fa ny valiny mahazatra azo avy amin'ny afitsapana adin-tsaina ataotsy manilika ny mety hisian'ny aretim-po amin'ny ho avy. Izany dia satria takelakambola afakavaky, mamorona clots ary manakana artery.
Inona no hitranga raha mihoatra ny tahan'ny fitempon'ny fonao ianao?
Fanatanjahan-tena mihoatra ny 85% amin'nyny tahan'ny fitempon'ny fonyafaka mitondraianareomarary tonon-taolana sy hozatra. Mametrakaianareotandindomin-doza noho ny fiofanana be loatra, izay mety hahakivyianareoavy amin'ny fampiharana, izay tsy mamokatra mihitsy.
Inona no heverina ho fitsapana adin-tsaina tsy ara-dalàna?
nyara-dalànamiteraka dingana roa amin'ny anaofitsapana adin-tsainadia fanondroana fa ratsy ny fikorianan'ny ranao ao am-ponao, na manao ahoana na manao ahoana ny fiezahana ataonao. Ny fikorianan'ny rà voafetra dia manondro aretin'ny lalan-drà goavambe.06.21.2018
Firy taona ny salan'isan'ny olona amin'ny fitsapana adin-tsaina?
Ny salanisan'ny mpandray anjara tamin'ny fianarana dia 53,5 taona ary 59 isan-jaton'ny lehilahy. Ny taratasy dia navoaka tao amin'ny European Journal of Preventive Cardiology. Ny fandinihana dia nahitana fa ny tombana taona mifototra amin'ny fahombiazan'ny fanatanjahan-tena dia tsara kokoa amin'ny faminavinana ny fiainana noho ny taonan'ny marary. Tanteraka ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy izany.
Inona ny tahan'ny fitempon'ny fo amin'ny fitsapana adin-tsaina ho an'ny olon-dehibe?
Inona ny tahan'ny tahan-dalàna ara-dalàna ao anatin'ny fitsapana adin-tsaina? Miankina amin'ny taonanao ny tahan'ny tanjonao mandritra ny fitsapana adin-tsaina. Ho an'ny olon-dehibe, ny tahan'ny fitomboan'ny fon'ny fatu be indrindra dia 220 minus ny taonanao. Noho izany, raha 40 taona ianao, ny tahan'ny tahan'ny fo voalaza mialoha dia 220 - 40 = 180.
Inona no dikan'ny valin'ny fitsapana adin-tsaina?
Amin'ny fitsapana simika dia avy amin'ny fanafody manaitaitra ny fo ny adin-tsaina. Ny fitsapana adin-tsaina simika dia mampiasa sary amin'ny fo miaraka amin'ny ECG. Ilaina ny fakana sary satria mety tsy ho hitan'ny ECG irery ny fiovan'ny fihenjanana amin'ny zava-mahadomelina. Mpanolo-tsaina iray no manazava ny valin'ny fitsapana alahelo.